Potassium Sorbate Cas 24634-61-5 Soo-saareyaal, Soo-saareyaal ka socda Bolise
[CAS MAYA. ] 24634-61-5
[Qaaciddada Molecular] C6H7KO2
[Miisaanka Molecular] 150.22
1. Waxyaabaha lagu ilaaliyo cuntada. Waxay si wax ku ool ah u xakameyn kartaa caaryada, khamiirka anaerobic-Aerobic-ka firfircoonida bakteeriyada, sida farmaajada, khamriga,
caano fadhi, hilib la qalajiyey, cider tufaaxa, cabitaannada fudud iyo cabitaannada khudradda, iyo alaabta la dubay. Si loo dheereeyo nolosha shelf ee cuntada oo loo ilaaliyo dhadhanka asalka ah ee cuntada.
2. waxaa loo isticmaalaa alaabooyin badan oo daryeelka shakhsi ahaaneed si loo joojiyo horumarinta microorganisms ee xasiloonida shelf.
3. Waxa ugu horrayn lagu isticmaalaa khamriga macaan, khamriga dhalaalaya, iyo qaar ka mid ah kuwa adag.
[Ku saabsan Potassium Sorbate]
Potassium Sorbate waa milixda potassium ee sorbic acid. Isticmaalkeeda aasaasiga ah waa sida ilaalinta cuntada (lambarka E 202). Potassium sorbate waxay waxtar u leedahay codsiyo kala duwan oo ay ku jiraan cuntada, khamriga, iyo daryeelka shakhsi ahaaneed.
Potassium sorbate waa nooc cusub oo ka mid ah ilaalinta cuntada, taas oo joojin karta koritaanka bakteeriyada, caaryada iyo khamiirka iyada oo aan si xun u saameynayn dhadhanka cuntada. Waxay ku lug leedahay dheef-shiid kiimikaad ee bini'aadamka, waxay leedahay badbaadada shakhsi ahaaneed, waxaana caalami ahaan loo aqoonsan yahay inay tahay ilaalinta cuntada ugu fiican. Sunteedu aad ayay uga hoosaysaa waxyaabaha kale ee lagu ilaaliyo, waxaana hadda si weyn loogu isticmaalaa cuntada. Potassium sorbate waxay si buuxda u samayn kartaa saameynteeda jeermiska ee dhexdhexaadka acidic, laakiin waxay leedahay saameyn yar oo ka hortag ah oo hoos yimaada xaalado dhexdhexaad ah.
Hadaad rabto inaad waxbadan ka ogaato Potassium Sorbate macluumaad, ku soo dhawow inaad nala soo xiriirto!